Warshadaha safarku waxay ubaahanyihiin inay sifiican ulaxidhiidhaan si loo kordhiyo kalsoonida macaamiisha UK
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka UK » Warshadaha safarku waxay ubaahanyihiin inay sifiican ulaxidhiidhaan si loo kordhiyo kalsoonida macaamiisha UK
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dadka • Safarka Tareenka • Dib-u-dhiska • jiga • Waajib ah • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Gaadiidka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka UK • Wararka kala duwan
Warshadaha Yravel oo ay BBC Watchdog su'aal gelisay wax yar ayey u qaban doontaa inay u xaqiijiso kalsoonida macaamiisha UK inay safraan mustaqbalka dhow.
Kalsoonida macaamiisha ayaa ka muhiimsan sidii hore tan iyo markii uu faafay
Xidhiidhka ka dhexeeya warshadaha safarka ee Boqortooyada Midowday iyo macaamiisha ma ahan mid xoogan
Hay'adaha warshadaha safarka waxay u baahan yihiin inay qaadaan hanaan firfircoon oo ay doortaan inay qaataan mowqif dadweyne oo badan
Hay'adaha waxsoosaarka ayaanan sameynin wax ku filan si loo hubiyo howlwadeenada dalxiiska iyo wakaaladaha socdaalka inay macaamiisha ku wargeliyaan xuquuqdooda kahor ballanta. Sidoo kale, hay’adihii ka hoos baxay arintan ayaan lala xisaabtamin. Sidaas darteed, warshadaha safarka waxaa su'aal gelinaya BBC Watchdog wax yar ayey ka qaban doontaa inay u xaqiijiso kalsoonida macaamiisha UK inay safraan mustaqbalka dhow.
Ballan-qaadka 'Dalbashada Dalxiiska Xirmada' ee hay'adda 'Watchdog' waxay ballan qaadaysaa wax ka beddelka iyo kansarka bilaashka ah ee duulimaadyada ama ciidaha ay saameysay COVID-19, marka lagu daro ka shaqeynta soo celinta 14 maalmood gudahood. Si kastaba ha noqotee, hindisaha ay soo saartay hay'adda 'Watchdog' ayaa siinaysa aragti ah in ay jirto dhibaato ku saabsan warshadaha oo dhan, taas oo aan ahayn kiiska, iyada oo hay'adaha qaarkood ay si fiican u maareeyaan soo celinta macaamiisha, isbeddelada iyo kansarka si wanaagsan inta lagu jiro aafada.
Kalsoonida macaamiisha ayaa ka muhiimsan sidii hore tan iyo markii uu faafay. Marka loo eego baaritaanka UK COVID-19 Recovery, 46% jawaabeyaasha waxay ahaayeen 'aad' ama 'aad' aad uga walwalsan rajada safarka caalamiga ah, oo ka turjumaya shakiga dadweynaha. Ku lug lahaanshaha dhinac saddexaad sida Watchdog waxay u badan tahay inuu warshadaha ku tuurayo iftiin taban inta lagu jiro waqti muhiim ah.
Xidhiidhka ka dhexeeya warshadaha safarka ee Boqortooyada Midowday iyo macaamiisha ayaan ahayn mid xoogan, iyada oo macaamiisha ay raadinayaan waxyaabo kale oo kale si loo hubiyo halka laga dalbanayo. Hadday hay'adaha warshaddu si firfircoon uga shaqeyn lahaayeen hubinta in xuquuqda macaamiisha la wadaago oo si wax ku ool ah loola macaamilo, waxaa laga yaabaa inaysan tan imaan.
Hay'adaha warshadaha safarka waxay u baahan yihiin inay qaadaan hanaan firfircoon oo ay doortaan inay mowqif dad badan ka qaataan arrinta, ha noqoto wareysiyada telefishanka ama xayeysiinta. Dhiirrigelinta noocan ah waxay yareyn doontaa qaar ka mid ah welwelka ku saabsan ballansashada fasaxyada xirmada. Hawlwadeenada dalxiiska iyo wakaaladaha socdaalka ayaa sii ku taageeri kara dareenkaas adeegooda latalinta iyo xayeysiinta, iyagoo abuuraya fariin isdaba joog ah
Safaaradda Imaaraatka ee Israel waa astaamaha cusub ee Nabadda
Rajadu waxay ka soo duushay Edelweiss dalxiiska Tansaaniya ...
Ruushka ayaa dib u bilaabay Mareykanka, Talyaaniga, Belgium, Bulgaria, Jordan ...
Daalibaan ayaa 12.3 milyan oo doolar oo caddaan iyo dahab ah ka qaadatay ...
Iswaafaqsanaanta Talaalka La Ogolaaday Ayaa Dib Udhacaya ...
Qufullada Australia ayaa wax ka qaban kara safarka gudaha ...
Jahwareerka shahaadooyinka tallaalka ayaa caqabad ku ah safarka ...
WHO: Galbeedka Afrika waa dhimashada COVID-19 ...
Duulimaadyada Mareykanka ayaa laga yaabaa dhawaan in looga baahdo inay soo celiyaan khidmadaha ...
Caddaaladda Mareykanka Musuqmaasuqday? B737 Max Dhibbanayaasha fursad uma helin ...
Saamaynta Delta Airlines waxay ku dul kacaysaa COVID-19 cusub ...
Xorriyaddaha internetka ayaa aad hoos ugu dhacaya sannadkii 11aad oo xiriir ah
Union wuxuu dacwad ku soo oogayaa diyaaradda Qantas Airways oo ku saabsan Faafida baahsan ...
12 rakaab tareen ah ayaa ku dhintay, 5 kalena way ku dhaawacmeen daad ...
Dalxiiska Seychelles “Waqooyiga Ameerika Sanad ...